Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay dhigiisa Nigeria – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Nigeria ayaa xalay kulan kula qaatay xarunta Madaxtooyadda dalkaas Madaxweynaha shalay la caleemo saaray ee Jamhuuriyadda Fedraalka Nigeria, Muhammadu Buhari.
Labada Madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta xirriirka labada dal, iyadoo Madaxweynaha Soomaaliya uu warbixin ka siiyey dhiggiisa xaaladda guud ee Soomaaliya gaar ahaan la dagaallanka kooxaha argagixisada ah.
“Dowladdaha Soomaaliya iyo Nigeria waxyaalo badan ayey wadaagaan, waxaa ka mid ah Kooxaha Al Shabaab iyo Boko Haram oo iska mid ah mabda’a iyo ficilada xun-xun ee ka fog bani’aadamnimadda, labada dowladdood arrimahaas waa ay iska kaashan doonaan” ayuu yiri Madaxweynaha.
Nigeria ayaa waxaa ka jooga Soomaaliya Ciidamo Boolis ah oo qeyb ka ah howl galka AMISOM, iyadoo Nigeria ay tahay wadanka ugu dadka badan Qaaradda Afrika.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka mid ahaa Madaxdii lagu casuumay caleema saarka Madaxweyne Buhari oo si rasmi ah shalay xilka loogu dhaariyay, isla markaana xafiiska kala wareegay Madaxweynihii hore Jonathan Goodluck.
Somaliland Oo Ogalaatay in ay dajiyaan Qaxaaoti kasoo Cararay Dagaalada Yemen